विहान उठ्ने वित्तिकै खुट्टा राख्नु भन्दा पहिले किन छुनुपर्छ हातले जमिन ? पुरा भिडियो हेर्नुहोस् - Enepalese.com
विहान उठ्ने वित्तिकै खुट्टा राख्नु भन्दा पहिले किन छुनुपर्छ हातले जमिन ? पुरा भिडियो हेर्नुहोस्
इनेप्लिज २०७५ माघ १८ गते ११:३० मा प्रकाशित
एजेन्सी । विहान ओछ्यानबाट उठ्ने वित्तिकै अथवा जमिनमा खुट्टा राख्नु भन्दा पहिले जमिन छोएर हात शीरमा लगाउनु पर्दछ। विहान उठेर जमिनलाई ढोग गर्नु हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएको संस्कार छ। यो संस्कार धार्मीक परम्पराका रुपमा स्थापित हुनुको पछाडि पनि अथार्थता लुकेको छ। हामीले धरती माताप्रति कृतज्ञता जगाउन यो परम्परा चल्दै आएको हो। वेदले पृथ्वीलाई आमा भनेर उनको बन्धना गरेका थिए। किनकी हाम्रो शरीर भूमी तत्वबाट बनेको छ।
भूमीमा उब्जनी भएको अन्न खाएर तथा पानी पिएर हामी बाँचेका छौँ। त्यसैले हामी पृथ्वीप्रति ऋणी छौँ। जमिनमा खुट्टा राख्नु हाम्रो बाध्यता हो। त्यसैले हामीले बाध्यतालाई क्षमा मागेर विहान सधै जमिन छोएर प्रार्थना गर्नु पर्दछ। पुरा भिडियो हेर्नुहोस्